Diabetes – Page 18 – Healthy Life Journal
နှာခေါင်း၏ ဝင်လေထွက်လေအရ သိရှိနိုင်သော ရောဂါဝေဒနာ ၅ ခု
ဇွန်ခိုင်ဦး ( ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်) အရင် ဘီစီ ၄၀ဝ လောက်တုန်းက ရောဂါတွေ ကိုရှာဖွေဆန်းစစ်ရာမှာ နှာခေါင်းကနေဝင်ထွက်တဲ့ လေတွေကို အကဲဖြတ်ခဲ့ကြတယ်လို့ သိရပါတယ်။ နှာခေါင်းရဲ့ ဝင်လေ၊ ထွက်လေအနံ့ဟာ တချို့ရောဂါဝေဒနာတွေနဲ့ ဆက်စပ်နေတယ်လို့ နှစ်ပေါင်းများ စွာကတည်းက ဆေးပညာရှင်တွေက ဆိုခဲ့ကြပါ...
ဆီးချိုသွေးချို ကာကွယ်လို့၊ အနာဂတ်ဘဝ သာယာဖို့၊ ယနေ့စတင် ဆောင်ရွက်စို့
ပါမောက္ခဦးကိုကို ဆီးချိုနှင့်အထွေထွေရောဂါ အထူးကုဆရာဝန်ကြီး ၁၉၂၁ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလမှာ အင်ဆူလင် ဟော်မုန်းဓာတ်ကို Charles Best ဆိုသူနဲ့ အတူစတင် ရှာဖွေတွေ့ရှိနိုင်ဖို့ အကြံဉာဏ် စတင်ခဲ့သူ Frederick Banting ကို ဂုဏ်ပြုတဲ့အနေနဲ့ သူ့မွေးနေ့ဖြစ်တဲ့ နိုဝင်ဘာ ၁၄...
ခြေထောက်နဲ့ ပေါင်ထုံကျဉ်တဲ့ ပြဿနာ အဖြေရှာ
မေး. ဆေးလည်း စစ်ပြီးပါပြီ။ ဘာရောဂါမှ မတွေ့ပါဘူး။ ခြေထောက်နဲ့ ပေါင်တွေက ထုံကျဉ်နေပါတယ်။ ညနေဘက်ဆို ပိုဆိုးပါတယ်။ ဘာဖြစ်လို့ပါလဲ ဆရာ၊ ဘာလုပ်သင့်ပါသလဲ။ ဒေါ်ဝင်းကြိုင်၊ ကျောက်ပန်းတောင်း။ ပါမောက္ခဦးကိုကို ဆီးချိုနှင့် အထွေထွေရောဂါအထူးကုဆရာဝန်ကြီးမှဖြေကြားသည် ဖြေ. မြန်မာနိုင်ငံမှာ အဖြစ်များတာက ဆီးချိုသွေးချို...
ဆီးချိုသွေးချိုရောဂါနှင့် အိပ်စက်မှု ပြဿနာ
ပါမောက္ခဒေါ်သန်းသန်းအေး ( ဆီးချိုနှင့် အထွေထွေရောဂါ အထူးကုဆရာဝန်ကြီး ) လူတွေဟာ မွေးဖွားလာကတည်းကအိပ်တာနဲ့ စားတာ(နို့စို့တာ)နှစ်ခုကိုပဲ အဓိက ပြုလုပ် ကြရပါတယ်။ အိပ်တာနဲ့ စားတာ နှစ်ခုစလုံးကို စွမ်းအားကြီးတဲ့ ဆန္ဒ(Powerful Internal Drive) တွေက ထိန်းချုပ်ထားပါတယ်။ အစာမစားဘဲနေတဲ့အခါ...
သွေးချိုကျရင် ဘာဖြစ်တတ်သလဲ . . .
ပါမောက္ခဒေါ်သန်းသန်းအေး ဆီးချိုနှင့် အထွေထွေရောဂါ အထူးကုဆရာဝန်ကြီး သွေးချိုအကျလွန်တဲ့ အဖြစ်အပျက်လေး တစ်ခုအကြောင်းကို စာဖတ်သူတွေ မှတ်မိနားလည်စေဖို့ အတွေ့အကြုံလေးတစ်ခုကို ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။ တစ်ခါက အသက် ၇၀ အရွယ်လူနာ ဦးတင်ရွှေဟာ သတိလစ်ပြီး အိပ်ပျော်သလိုဖြစ်နေတာ တစ်ရက်နီးပါး ရှိသွားတဲ့အတွက် သမီးဖြစ်သူမပြုံးက အရေးပေါ်အနေနဲ့...
ပါမောက္ခ ဒေါ်သန်းသန်းအေး ဆီးချိုနှင့် အထွေထွေရောဂါ အထူးကုဆရာဝန်ကြီး ယခင်တစ်ပတ်မှအဆက် သွေးချိုမြင့်မားတာကြောင့် ရရှိတဲ့ ဆိုးကျိုးက ပိုအတွေ့များတယ်၊ တဖြည်းဖြည်းချင်း ဖြစ်တယ်၊ သူ့ကြောင့်ဖြစ်မှန်းတောင် မသိကြတဲ့သူတွေ အများကြီး ရှိပါတယ်။ ဒါက”အနှေးလူသတ်သမား”ဖြစ်ပါတယ်။ တခြား တစ်ဖက်မှာလည်း သွေးချိုအကျလွန်တဲ့ ဆိုးကျိုးဟာ အဖြစ်နည်းပေမယ့်...
ဆီးချိုရှိရင် ချိုတဲ့ သစ်သီး စားနိုင်သလား . .
ပါမောက္ခဦးကိုကို (ဆီးချိုနှင့် အထွေထွေရောဂါ အထူးကုဆရာဝန်ကြီး) မေး . ကျွန်မ ဖေဖေက ဆီးချိုရောဂါရှိလို့ပါ ဆရာ။ သူက သစ်သီးတွေကြိုက်တော့ ကျွန်မသိချင်တာက ဆီးချိုရှိရင် ချိုတဲ့ သစ်သီးတွေကို စားလို့ရနိုင် ပါ့မလား ဆရာ။ ခိုင်ခိုင်၊ ညောင်ဦး။ ဖြေ...
သာမန်လူတွေမှာ သွေးတွင်းအချိုဓာတ် (Blood Glucose)တွေဟာ သတ်မှတ်ထားတဲ့ ဘောင်အတွင်းမှာပဲ ရှိသင့်ပါတယ်။ သွေးချိုတွေ သိပ်များနေရင် တာရှည်မှာမကောင်းတဲ့ ဆိုးကျိုးတွေ အမြန်ဆုံး ကိုယ့်ရှေ့ကို ရောက်လာမှာဖြစ်ပြီး တစ်ဖက်မှာလည်း သွေးချိုဓာတ်တွေ သိပ်နိမ့်ကျသွားရင် သတိလစ်ပြီး ဆိုးရွားတဲ့နောက်ဆက်တွဲဆိုးကျိုးတွေ ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်လည်း ဆီးချိုသွေးချို...